Faty olona nikararana tany Anjozorobe : 47 ireo namoy ny ainy, 24 naratra | NewsMada
Faty olona nikararana tany Anjozorobe : 47 ireo namoy ny ainy, 24 naratra
Par Taratra sur 30/01/2017
47 no namoy ny ainy, 24 naratra. Ireo, araka ny tarehimarika farany navoakan’ny fanjakana, ny vokatr’ilay lozam-pifamoivoizana nahatsiravina, vokatry ny fivarinan’ny kamiaobe iray tao anaty rano, tany Anjozorobe, ny asabotsy maraina teo. Nikararana ny faty, mitohy ny fikarohana ireo razana mbola tsy hita.
Fahasahirana sy alahelo tanteraka! Izay no nitranga tany Anjozorobe ny asabotsy maraina teo, nandritra ilay lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona 47 ankizy latsaky ny 10 taona ny folo tamin’ireo. Nihampatrampatra nalahatra tamin’ny tany tao amin’ny CSB II Anjozorobe ny razana am-polony maro. Olon-dehibe, zazakely… Nihoson-dra ny trano, nisahotaka ny fianakaviana sy ny mpitsabo nanolona ireo razana sy olona naratra marobe. Somebiseby be ihany ny rehetra nanoloana izany.
Kamiao iray nitondra mpanambady vao sy ny fianakaviany avy any amin’ny kaominina Ambongamarina nikasa hamonjy soratra any Talatanivolonondry ireto niharan-doza ireto. Niala lalana ary latsaka tany ambany tetezana ary difitra tao amin’ny ranon’i Mananara ilay kamiao, tokony 3 km an’Anjozorobe. Nalentiny tao avokoa ireo mpandeha efa 70 mahery tao anaty kamiao, ka izay no nahafaty ireo olona 47 sy ny naratra 24 ireo. Anisan’ny naratra mafy ilay mpamily kamiao ary nalefa notsaboina taty an-dRenivohitra.
Fianakaviana enina, ray aman-dreny sy ny zanany avy amin-dralehilahy avy any Ambongamarina sy ny avy amin-dravehivavy avy any Ampaneva ireo indray namoy ny ainy.
Anisan’ny namoy ny ainy ireto mpanambady vao, ary mbola tsy hita popoka hatramin’ny asabotsy nikarohana ny razana ilay vehivavy, izay efa nitondra vohoka.
Raim-pianakaviana iray niaraka tamin’ny vady aman-janany, anisan’ireo nandeha tamin’ilay kamiao no sisa velona. Maty avokoa ireo vady aman-janany niaraka taminy.
Fitantaran’ny vavolombelona ihany koa, nilaza fa izay nahay nilomano no avotra tamin’ity loza ity. “Lehilahy iray nahay nilomano tao anatin’ireo mpandeha nanavotra izay azony navotana ary nampiakatra an-tanety izay zakany”, hoy ny fanazavana.
Ny olona sasany nitantara fa rehefa nosintonina ilay kamiao, nisy tamin’ireo olona maty no hita mbola nifikitra tamin’ilay kamiao. Ny olona sasany natsingevana sy nalentiky ny rano. Ny fokonolona nitondra lakana namonjena ireo olona ireo sy nampiakarana ny razana, izay vao tonga ny mpamonjy voina avy aty an-dRenivohitra.
“Fandehanana mafy, ary efa intelo no saika niharan-doza talohan’ity nitranga ity ilay kamiao io. Nisy tamin’ny mpandeha efa nidina tany aloha tany noho ny tahotra ny fandehanan’ilay fiarabe mafy”, hoy ihany ny fitantaran’ireo olona tany an-toerana.
Ny olona sasany mbola nanamafy fa toy ny mamo ilay mpamily, lanonana rahateo ny alin’io ka tsy nilaozan’ny tsy nisotro toaka ny rehetra.
Ankoatra izany, saro-pady iny lalana Anjozorobe iny, indrindra mialoha ny hidirana teo amin’ny tetezan’i Mananara. Fidinana ary fiolanana izay vao ilay tetezana. Azo heverina fa sahirana izay fiara mandeha mafy miditra eo, indrindra fa kamiao mitondra olona marobe tahaka izao.
“Efa norarana ilay mpamily. Toy ny nitsoaka zandary ihany koa izy noho ny fitondrana olona marobe izay tsy tokony nataony”, hoy ihany ny fanamafisan’ny fianakaviana.
Ny zandary nanao ny fanadihadiana nilaza fa nandeha mafy tokoa ilay fiara, ary hita tamin’ny endriky ny fisehon’ny loza. Efa manao ny fanadihadiana rehetra momba ity loza ity izy ireo amin’izao fotoana izao. Ilay mpamily mbola manaraka fitsaboana.
Nidodododo tany an-toerana ny solontenam-panjakana nitondra fanampiana ireo niharan-doza velona sy nampionona ny fianakavian’ireo namoy ny ainy. Ny faritra Analamanga nitondra mpamonjy voina taty an-dRenivohitra nanampy tamin’ny fikarohana ny razana. Tany an-toerana ny minisitry ny Fahasalamana, ny minisitry ny Fitaterana sy ny Famantarana ny toetradrano ary ny minisitry ny Mponina.